China pen pen pịa igwe ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Taile
Nke a itienna Heat pịa igwe ọtụtụ-eji maka iche iche nke itienna, dị ka plastic itienna, ballpoint itienna, wdg ike ibipụta logos on 6 itienna na ọtụtụ n'out oge, etinyere maka iche iche iche iche nke itienna, n'ihi na ihe atụ, plastic itienna, ballpoint itienna, wdg The pen pịa nwere swing-pụọ ogwe aka, ngụda mmetụta, mgbochi na-amị amị ahụ na sọrọ dijitalụ njikwa nke na-eme nyefe ọrụ ihe adaba.
1. [Safein ojiji] Ngabiga-pụọ ogwe aka e mere maka mma ịtụkwasị na-ewere; Anti-amị amị amị nke adaba ọrụ. dum ebi akwụkwọ usoro adaba na nchebe. Mgbe nrụgide ahụ mechiri emechi, itienna ga-ofu na worktop maka mma ebi akwụkwọ mmetụta.
2.Take microprocessor akara na oke ebe nchekwa na elu akara nkenke, aka akara obubọk. Nwere ike ibuli na ntụgharị nrịgo 360, dị mfe iburu ihe ma nyefee ihe oyiyi na ihe pụrụ iche pụrụ iche nwere oke ọkpụrụkpụ. Ejiri akụrụngwa dị elu ejiri rụọ ọrụ ndị dị mkpa, nke na-adịgide adịgide ma sie ike. Mkpa agba ọgwụgwọ, ezigbo onye na elu ọkwa. N'ihi nrụpụta akụrụngwa kachasị mma, ngwaahịa onyonyo emere ọ dị mma.
3. [Digital smart njikwa] Okpomọkụ na oge njikwa ike na otu ngosi maka mfe ọnọdụ na chọpụtara. Ejiri ya na njikwa njikwa aka nke microprocessor na-achịkwa maka njikwa dị elu. Ọnụ ọgụgụ ngwangwa etinyere, usoro iheomume mgbe ejiri aka na-agbada, na-akwụsị buzzing mgbe aka ahụ bilitere.
4. [Inogide àgwà] The isi mmiri na-imported ngwaọrụ na n'elu-emeso ya na a lacquer imecha nke na-eme igwe ezigbo, ọzọ mụ na inogide.
5. [High arụmọrụ] Ọtụtụ-eji maka iche iche nke itienna, dị ka plastic itienna, ballpoint itienna, wdg 6 itienna nwere ike zigara n'otu oge.
6. [Ọ dị mfe ibu] Ọdịdị ahụ dị mma, ọ dịkwa mma ibu, dịkwa fechaa
7.Touch ihuenyo Ikanam ngosi nke okpu mmiri igwe.
8.With Silicone kpo oku na mpe mpe akwa iji chebe pen, ka na-ekpo ọkụ zọ ihe kwesịrị ekwesị.
9.Ọ bụla pen pen, ọ dịghị mkpa sublimation mkpuchi.
10.This itienna Okpomọkụ pịa igwe ọtụtụ-eji maka iche iche nke itienna, dị ka plastic itienna, ballpoint itienna, wdg Ma itienna ga-abụ okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ.
11.Mkpụrụ ahụ abụghị osisi, na-egbochi ikpo ọkụ nke nnyefe, ma ọ chọghị mpempe akwụkwọ silicone / teflon dị iche.
10. [Mgbe ahịa ọrụ] afọ ojuju guarantee.If maka ihe ọ bụla na ị bụghị afọ ojuju, biko mee ka anyị mara na anyị ahịa ọrụ ga-eme ike anyị niile iji nyere gị aka.
:Dị: Igwe Igwe Igwe Igwe
Ojiji: mkpịsị odee
Automatic ọkwa: ntuziaka
Ike Ike: 350W
Ngwa: ihe ọ bụla pen pen, ọ dịghị mkpa sublimation mkpuchi
Efere Typedị: igwe sublimation
Akụkụ (L * W * H): 48 * 42 * 37cm
Bara uru: 6 itienna n'otu oge
Printing ebe: Plastic itienna (dayameta si 8-10mm)
Akwụkwọ: pen transfer paper
1 x Digital Pen Okpomọkụ Press Machine
1 x Ntuziaka Ndị Ọrụ Bekee
Nke gara aga: Foto muglọ Mkpọrọ okpomọkụ pịa igwe
Osote: Protale okpomọkụ pịa igwe
Pen Okpomọkụ Press
Pen Okpomọkụ Press Machine